Post-op tips for women with LSCS - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” ခှဲစိတျမှေးဖှားပွီးတဲ့ ခှဲကွောငျးက အနာကကျြမွနျစဖေို့ “
ကလေးမှေးပွီးခါစအခြိနျတှမှော ပွနျလညျပွီး နာလနျထူဖို့ ကွိုးစားရတာဟာ ကိုယျဝနျဆောငျကာလကွီးတဈခုလုံးထကျတောငျ ပိုပွီး ဂရုစိုကျရပါသေးတယျတဲ့။ခှဲစိတျပွီးမှေးဖှားထားတဲ့ မမေတေို့အတှကျကတော့ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ ၆ပတျလောကျအထိကို အနာကကျြဖို့ (ကလေးကို တဈဖကျမှာ ပွုစုရသလိုပဲ )ဂရုစိုကျရပွနျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ အခုပွောပွမယျ့ အခကျြအလကျတှကေ ခှဲစိတျပွီးစ အနာ/ခှဲရာ အတှကျ ဂရုစိုကျရမယျ့ အခကျြလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။
အနာကို နစေ့ဉျဆေးကွောပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ အဝတျစို ဒါမှမဟုတျ ရဖေတျအဝတျ နဲ့ ဆေးကွောလို့ရပါတယျ။ အနာနရောကို အတငျးဖိပှတျတာမြိုးတော့လညျး မလုပျပါနဲ့။အဲဒါက အနာကကျြစတေဲ့ ဖွဈစဉျကို ထိခိုကျစလေို့ပါ။ဆေးပွီးပွီဆိုရငျလညျး သှခွေ့ောကျစတော သှအေ့ောငျအောငျ သနျ့တဲ့ အဝတျနဲ့ တို့ သုတျတာမြိုး လုပျလို့ရပါတယျ။ပွီးတော့ ခဏလေး လသေလပျအောငျထားပေးပါ။ ခွောကျသှသှေ့ားမှပဲ အပျေါကနေ dressing လုပျတာ ၊ ပတျတီးနဲ့ အုပျတာကို ပွုလုပျပေးပါ။
Dressing လုပျထားတဲ့ ပတျတီးက ညဈပနေတော စိုစှတျနတောရှိရငျ အသဈလဲလှယျပေးပါ။
ခှဲစိတျထားတဲ့ အနာနရောက အတှငျးခံဝတျတဲ့ ထိပျဆီးခုံပတျလညျအရငျးလောကျမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ ခှဲတဲ့နရောကို အတှငျးခံနဲ့ ဒါမှမဟုတျ အထကျဆငျနဲ့ ခပျတငျးတငျးထိမိ ပှတျမိတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျတဲ့အတှကျ အတှငျးခံကို နဂိုဝတျနကေထြကျဆိုဒျပိုကွီးတာပှတာဝတျဖို့ ထဘီကိုခပျလြော့လြော့ ဝတျဖို့က အဆငျပွစေတောဖွဈပါတယျ။
2. အနာကို ကောငျးမှနျစှာ ကကျြစပေါ
ခှဲထားတဲ့နရောကို ကနျြးမာစှာနဲ့ အနာကကျြစဖေို့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အနာကကျြဖွဈစဉျကို ဂရုစိုကျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ အနာကကျြဖို့က အခြိနျတဈခုစောငျ့ရပါတယျ။ စိတျလောလို့ အလငျြလိုနလေို့လညျး မဖွဈပါဘူး။ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အတှငျးရော အပွငျကပါ အနာကကျြဖွဈစဉျ အတှကျ လုပျဆောငျပေးနိုငျသမြှ လုပျဆောငျရမှာပါ။ အိမျသာတကျအလေးသှားရတဲ့အခါ အားစိုကျရတာ ညှဈရတာမြိုးမှာ အခကျအခဲရှိနိုငျပါတယျ၊ အနာကွောငျ့ပါသလို stress ကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ အမြှငျဓာတျပါတဲ့ အစာတှစေားသုံးခွငျးဖွငျ့ ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ။ရဓောတျပွညျ့ဝအောငျ နထေိုငျခွငျး ရမြေားမြားသောကျသုံးပေးခွငျးကလညျး နောကျတဈခကျြပါပဲ။
Vitamin A,D,E ပွီးတော့ zinc နဲ့ copper ဓာတျအမြားဆုံးပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေို ရှေးခယျြစားသုံးခွငျးက အနာကကျြခွငျး ဖွဈစဉျကို အထောကျအကူပေးပါတယျ။ ကိုယျခံစှမျးအားကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ ဂငျြး၊ ကွကျသှနျဖွူ နဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှရေဲ့ ကွိတျရညျတှလေညျး သောကျလို့ရပါသေးတယျ။ ဆရာဝနျက လိုအပျရငျ ရောဂါပိုး မဝငျရောကျစရေနျ ပိုးသတျဆေး ပေးထားပါလိမျ့မယျ။
3.အနာတဈဝိုကျကို အနားပေးနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။
Busy mommy တှေ အနနေဲ့ အပွငျထှကျရမယျ အလုပျလုပျမှ ဖွဈမယျဆိုတာတှကေလညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ရုတျတရကျ ခန်ဓာကိုယျကို လိမျပွီးလှညျ့လိုကျတာ ခန်ဓာကိုယျကို ဘေးစောငျးတာမြိုးတှကေို ဆငျခွငျဖို့ လိုပါတယျ။ကားမောငျးတာ တံမွကျစညျးလှညျးတာ ခကျြပွုတျတာတှေ လုပျရငျ သတိထားဖို့ လိုအပျပါလိမျ့မယျ။မလုပျရငျပိုကောငျးပါတယျ။
အဓိကကတော့ အနာတဝိုကျက tissue အသားစတှကေို ဆှဲဆနျ့သလိုဖွဈစမေယျ့ လှုပျရှားမှုတှကေို မလုပျမိဖို့ပါပဲ။ ရယျတဲ့အခါ နှာခတြေဲ့အခါ အလေးသှားလို့ ညှဈတဲ့အခါတှကေို ဂရုစိုကျစခေငျြတာပါ။ဗိုကျစညျးတဈခုခု ဝတျထားရငျလညျး အဆငျပွစေတောပေါ့။ လမျးလြှောကျတဲ့အခါ ခါးကို ကောငျးမှနျတဲ့ good posture အနအေထား ရှိခွငျးကလညျး ခန်ဓာကိုယျတှငျးကွှကျသားတှကေို ခါးကကွှကျသားတှနေဲ့ ထိနျးထားပေးပါတယျ။
ခဈြတငျးနှီးနှောမှုတှကေိုတော့ ခှဲစိတျမှေးပွီး ၆ပတျကြျောခနျ့အထိ ကနျ့သတျထားပါတယျ။ ပွီးတော့မှာ ကိုယျ့ အနာကကျြခွငျးပျေါမှာ မူတညျပွီး ပွောငျးလဲနိုငျလို့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။ပုခကျအပါအဝငျ သငျ့ရငျသှေးလေးထကျ လေးတဲ့ ဘယျအရာကိုမှ မမပါနဲ့။ တခွားကနျြတဲ့ ကလေးတှရေဲ့ မနာလိုမှုတှေ မကရြောကျအောငျလညျး ဂရုစိုကျပါ။ သူတို့တှနေဲ့ ရုပျရှငျအတူကွညျ့တာ စာအုပျဖတျပွတာ သူတို့နဲ့အတူအိပျစကျခွငျးတို့က ပွလေညျစမေယျ့နညျးလမျးတှပေါ။ ဒါသူတို့ရဲ့ မောငျလေး /ညီမလေးဖွဈကွောငျး သူတို့ရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတဈခု အဖွဈ တနျဖိုးထားလာအောငျ စညျးရုံးပေးပါ။
4. အနာနဲ့ ကစားပေးပါ။
အနာနဲ့ကစားပေးပါဆိုတာက တကယျတော့ အနာနဲ့ ပတျဝနျးကငျြနရောတှမှော နဂိုအတိုငျး လှုပျရှားသှားလာမှုကို ရစေ ဖွဈစနေိုငျဖို့ပါ။ သှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးလာစမေယျ၊ အဲဒီအခါ သှေးလှညျ့ပတျမှုနဲ့ အတူ အနာကကျြစမေယျ့ အာဟာရတှကေလညျး ပိုပွီး အထောကျအကူပွုစမှောပါ။ ကွှကျသားတှလှေုပျရှားစခွေငျးကလညျး ဆဲလျထဲမှာရှိတဲ့ အညဈအကွေးတှကေို ထှကျစပေါတယျ။ မှေးဖှားပွီးနောကျ မိခငျတှလေုပျသငျ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို လလေ့ာလို့ရပါတယျ။ဒါပမေယျ့ တဈခြို့သော လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေိုတော့ ဗိုကျခှဲမှေးထားတဲ့ မမေတေို့အတှကျ ကနျ့သတျထားပါတယျ။
the U.K.’s National Collaborating Centre for Women and Children’s health က ထုတျပွနျထားတဲ့ the Clinical Guidelines အရ သာမနျလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို ခှဲစိတျမှေးဖှားပွီး ၁၀ပတျအကွာအထိ ကနျ့သတျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အတနျအသငျ့ လှုပျလှုပျရှားရှားနပေေးခွငျးကလညျး အနာကကျြဖို့ကောငျးမှနျစတေယျဆိုတာကို ဆရာဝနျတှကေ အသအေခြာ သိကွပါသေးတယျ။ဘယျအခြိနျမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးပွနျစရမလဲ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။ရကေူးကနျထဲ ဒိုငျဗငျပဈခလြိုကျဖို့ အထိ မလိုသေးပါဘူး။ပွေးစကျပျေါမှာ ဖွညျးဖွညျးခငျြး နငျးပွေးခွငျးကလညျး အနာကကျြစဖေို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုပါပဲ။
ကလေးပိစိကှေးကို အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ ကွညျ့သလိုပဲ အနာကိုလညျး ဂရုစိုကျပါ။ပွောငျးလဲမှု တဈခုခု ရှိတယျထငျရငျ ဆရာဝနျကို တိုငျပငျပါ။
နောကျတဈခုက အနာတဝိုကျမှာ ထုံတာ နီရဲရောငျရမျးလာတာ ယားယံလာတာ သှေးစို့စို့ထှကျတာ စတာတှကေတော့ ဖွဈတတျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အဖြားကွီးတာ ရုတျတရကျဖောငျးတကျနီရဲပွီး အရညျထှကျလာတာ ခွထေောကျတဈဖကျ ဒါမှမဟုတျ နှဈဖကျလုံးမှာ အနီစငျးတှေ နာကငျြမှုတှရေောငျရမျးမှုတှဖွေဈလာတဲ့အခါ မိနျးမကိုယျက အနံ့ဆိုးဆိုးရှားရှားအရညျတှဆေငျးတာမြိုးမှာ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွသပါ။
နောကျတဈခုက ခှဲရာနရောက ပတျတီးမှာ သှေးတှအေပွညျ့စိုစှတျလာတာ အမြိုးသမီးသုံး pad က နာရီပိုငျးအတှငျးမှာ စိုရှဲလာတာ အနာခြုပျရိုးက ပွဲထှကျလာတဲ့အခါ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဗိုကျအောငျ့လာတဲ့အခါ အသကျရှုကွပျလာတဲ့အခါတှမှောတော့ ဆေးကုသမှုကို ခကျြခငျြး ခံယူသငျ့ပါတယျ။
စိတျရှညျမှုလေးနဲ့ ဝီရိယလေးနဲ့ ဂရုတစိုကျလေးနထေိုငျပေးရငျ အနာကကျြတာမွနျပွီး အနာဆိုတာ အတိတျရဲ့ အစိတျအပိုငျးလေး ဖွဈနတေော့မှာပါ။
ဒီခှဲကွောငျးရာလေးက သငျပွုလုပျခဲ့တဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာရဲ့ သင်ျကတေလေးပါ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျရဲ့ နာကငျြမှု မဟုတျပါဘူး။ သငျဟာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအတှကျ ထူးခွားဆနျးကွယျခဲ့သူပါ။
” ခွဲစိတ်မွေးဖွားပြီးတဲ့ ခွဲကြောင်းက အနာကျက်မြန်စေဖို့ “
ကလေးမွေးပြီးခါစအချိန်တွေမှာ ပြန်လည်ပြီး နာလန်ထူဖို့ ကြိုးစားရတာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကြီးတစ်ခုလုံးထက်တောင် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရပါသေးတယ်တဲ့။ခွဲစိတ်ပြီးမွေးဖွားထားတဲ့ မေမေတို့အတွက်ကတော့ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၆ပတ်လောက်အထိကို အနာကျက်ဖို့ (ကလေးကို တစ်ဖက်မှာ ပြုစုရသလိုပဲ )ဂရုစိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အခုပြောပြမယ့် အချက်အလက်တွေက ခွဲစိတ်ပြီးစ အနာ/ခွဲရာ အတွက် ဂရုစိုက်ရမယ့် အချက်လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အနာကို နေ့စဉ်ဆေးကြောပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အဝတ်စို ဒါမှမဟုတ် ရေဖတ်အဝတ် နဲ့ ဆေးကြောလို့ရပါတယ်။ အနာနေရာကို အတင်းဖိပွတ်တာမျိုးတော့လည်း မလုပ်ပါနဲ့။အဲဒါက အနာကျက်စေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်စေလို့ပါ။ဆေးပြီးပြီဆိုရင်လည်း သွေ့ခြောက်စေတာ သွေ့အောင်အောင် သန့်တဲ့ အဝတ်နဲ့ တို့ သုတ်တာမျိုး လုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ ခဏလေး လေသလပ်အောင်ထားပေးပါ။ ခြောက်သွေ့သွားမှပဲ အပေါ်ကနေ dressing လုပ်တာ ၊ ပတ်တီးနဲ့ အုပ်တာကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
Dressing လုပ်ထားတဲ့ ပတ်တီးက ညစ်ပေနေတာ စိုစွတ်နေတာရှိရင် အသစ်လဲလှယ်ပေးပါ။
ခွဲစိတ်ထားတဲ့ အနာနေရာက အတွင်းခံဝတ်တဲ့ ထိပ်ဆီးခုံပတ်လည်အရင်းလောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခွဲတဲ့နေရာကို အတွင်းခံနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အထက်ဆင်နဲ့ ခပ်တင်းတင်းထိမိ ပွတ်မိတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အတွင်းခံကို နဂိုဝတ်နေကျထက်ဆိုဒ်ပိုကြီးတာပွတာဝတ်ဖို့ ထဘီကိုခပ်လျော့လျော့ ဝတ်ဖို့က အဆင်ပြေစေတာဖြစ်ပါတယ်။
2. အနာကို ကောင်းမွန်စွာ ကျက်စေပါ
ခွဲထားတဲ့နေရာကို ကျန်းမာစွာနဲ့ အနာကျက်စေဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနာကျက်ဖြစ်စဉ်ကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အနာကျက်ဖို့က အချိန်တစ်ခုစောင့်ရပါတယ်။ စိတ်လောလို့ အလျင်လိုနေလို့လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အတွင်းရော အပြင်ကပါ အနာကျက်ဖြစ်စဉ် အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ အိမ်သာတက်အလေးသွားရတဲ့အခါ အားစိုက်ရတာ ညှစ်ရတာမျိုးမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်၊ အနာကြောင့်ပါသလို stress ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစာတွေစားသုံးခြင်းဖြင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် နေထိုင်ခြင်း ရေများများသောက်သုံးပေးခြင်းကလည်း နောက်တစ်ချက်ပါပဲ။
Vitamin A,D,E ပြီးတော့ zinc နဲ့ copper ဓာတ်အများဆုံးပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသုံးခြင်းက အနာကျက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့ ကြိတ်ရည်တွေလည်း သောက်လို့ရပါသေးတယ်။ ဆရာဝန်က လိုအပ်ရင် ရောဂါပိုး မဝင်ရောက်စေရန် ပိုးသတ်ဆေး ပေးထားပါလိမ့်မယ်။
3.အနာတစ်ဝိုက်ကို အနားပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
Busy mommy တွေ အနေနဲ့ အပြင်ထွက်ရမယ် အလုပ်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ရုတ်တရက် ခန္ဓာကိုယ်ကို လိမ်ပြီးလှည့်လိုက်တာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘေးစောင်းတာမျိုးတွေကို ဆင်ခြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ကားမောင်းတာ တံမြက်စည်းလှည်းတာ ချက်ပြုတ်တာတွေ လုပ်ရင် သတိထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မလုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
အဓိကကတော့ အနာတဝိုက်က tissue အသားစတွေကို ဆွဲဆန့်သလိုဖြစ်စေမယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေကို မလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ ရယ်တဲ့အခါ နှာချေတဲ့အခါ အလေးသွားလို့ ညှစ်တဲ့အခါတွေကို ဂရုစိုက်စေချင်တာပါ။ဗိုက်စည်းတစ်ခုခု ဝတ်ထားရင်လည်း အဆင်ပြေစေတာပေါ့။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ခါးကို ကောင်းမွန်တဲ့ good posture အနေအထား ရှိခြင်းကလည်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကြွက်သားတွေကို ခါးကကြွက်သားတွေနဲ့ ထိန်းထားပေးပါတယ်။
ချစ်တင်းနှီးနှောမှုတွေကိုတော့ ခွဲစိတ်မွေးပြီး ၆ပတ်ကျော်ခန့်အထိ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့မှာ ကိုယ့် အနာကျက်ခြင်းပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ပုခက်အပါအဝင် သင့်ရင်သွေးလေးထက် လေးတဲ့ ဘယ်အရာကိုမှ မမပါနဲ့။ တခြားကျန်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မနာလိုမှုတွေ မကျရောက်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ပါ။ သူတို့တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်အတူကြည့်တာ စာအုပ်ဖတ်ပြတာ သူတို့နဲ့အတူအိပ်စက်ခြင်းတို့က ပြေလည်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေပါ။ ဒါသူတို့ရဲ့ မောင်လေး /ညီမလေးဖြစ်ကြောင်း သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု အဖြစ် တန်ဖိုးထားလာအောင် စည်းရုံးပေးပါ။
4. အနာနဲ့ ကစားပေးပါ။
အနာနဲ့ကစားပေးပါဆိုတာက တကယ်တော့ အနာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေမှာ နဂိုအတိုင်း လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ရစေ ဖြစ်စေနိုင်ဖို့ပါ။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းလာစေမယ်၊ အဲဒီအခါ သွေးလှည့်ပတ်မှုနဲ့ အတူ အနာကျက်စေမယ့် အာဟာရတွေကလည်း ပိုပြီး အထောက်အကူပြုစေမှာပါ။ ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားစေခြင်းကလည်း ဆဲလ်ထဲမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ထွက်စေပါတယ်။ မွေးဖွားပြီးနောက် မိခင်တွေလုပ်သင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လေ့လာလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတော့ ဗိုက်ခွဲမွေးထားတဲ့ မေမေတို့အတွက် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
the U.K.’s National Collaborating Centre for Women and Children’s health က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ the Clinical Guidelines အရ သာမန်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ခွဲစိတ်မွေးဖွားပြီး ၁၀ပတ်အကြာအထိ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတန်အသင့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပေးခြင်းကလည်း အနာကျက်ဖို့ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်တွေက အသေအချာ သိကြပါသေးတယ်။ဘယ်အချိန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းပြန်စရမလဲ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ရေကူးကန်ထဲ ဒိုင်ဗင်ပစ်ချလိုက်ဖို့ အထိ မလိုသေးပါဘူး။ပြေးစက်ပေါ်မှာ ဖြည်းဖြည်းချင်း နင်းပြေးခြင်းကလည်း အနာကျက်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ကလေးပိစိကွေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့် ကြည့်သလိုပဲ အနာကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုခု ရှိတယ်ထင်ရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ပါ။
နောက်တစ်ခုက အနာတဝိုက်မှာ ထုံတာ နီရဲရောင်ရမ်းလာတာ ယားယံလာတာ သွေးစို့စို့ထွက်တာ စတာတွေကတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဖျားကြီးတာ ရုတ်တရက်ဖောင်းတက်နီရဲပြီး အရည်ထွက်လာတာ ခြေထောက်တစ်ဖက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဖက်လုံးမှာ အနီစင်းတွေ နာကျင်မှုတွေရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်က အနံ့ဆိုးဆိုးရွားရွားအရည်တွေဆင်းတာမျိုးမှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသပါ။
နောက်တစ်ခုက ခွဲရာနေရာက ပတ်တီးမှာ သွေးတွေအပြည့်စိုစွတ်လာတာ အမျိုးသမီးသုံး pad က နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ စိုရွှဲလာတာ အနာချုပ်ရိုးက ပြဲထွက်လာတဲ့အခါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဗိုက်အောင့်လာတဲ့အခါ အသက်ရှုကြပ်လာတဲ့အခါတွေမှာတော့ ဆေးကုသမှုကို ချက်ချင်း ခံယူသင့်ပါတယ်။
စိတ်ရှည်မှုလေးနဲ့ ဝီရိယလေးနဲ့ ဂရုတစိုက်လေးနေထိုင်ပေးရင် အနာကျက်တာမြန်ပြီး အနာဆိုတာ အတိတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး ဖြစ်နေတော့မှာပါ။
ဒီခွဲကြောင်းရာလေးက သင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ သင်္ကေတလေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ရဲ့ နာကျင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ထူးခြားဆန်းကြယ်ခဲ့သူပါ။